बीपीमा उपचाररत दुई संक्रमितको मृत्यु
मुख्य पृष्ठसमाचारबीपीमा उपचाररत दुई संक्रमितको मृत्यु
विराटनगर, २३ असोज । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत कोरोना भाइरस संक्रमित दुई पुरुषको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
मृतक दुवै सुनसरीका हुन् । इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का ६८ वर्षीय वृद्ध पुरुषको शुक्रबार बिहान १२ः३० बजेतिर मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए । वृद्धलाई असोज २० गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
कोरोना देखिए पनि बिहीबार मात्रै कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएका वृद्धलाई बचाउन नसकिएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । मृतकमा दीर्घ रोग भएनभएको प्रतिष्ठानले खुलाएको छैन ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानमा उपचाररत दुहवीका ५२ वर्षीय संक्रमित पुरुषको पनि उपचारका क्रममा बिहान २ बजेतिर मृत्यु भएको छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार मृतकमा मृगौला सम्बन्धी पुरानै समस्या थियो ।